Mamaha olana amin'ny lalao Steam miaraka amin'ireo mpamily Nvidia | Avy amin'ny Linux
Mamaha olana amin'ny lalao Steam miaraka amin'ireo mpamily Nvidia
Tonga tao Linux ny Steam mba hanokatra varavarana hampitomboana ny lohateny izany dia azo ampiharina amin'ny rafitra tsy amin'ny famoahana lalao ihany izay mifanaraka amin'ny sehatra raha tsy izany koa miaraka amin'ny fampidirana ny tetikasa Proton, izay manampy ny fahaizana mitantana lalao izay mifanentana amin'ny Windows amin'ny Linux ihany.
Na dia eo aza izany rehetra izany dia manana olana ny client Steam milalao lalao amin'ny Linux miaraka amin'ny karatra sary Nvidia. Tsy olana goavana ireo satria izy rehetra satria misy ny lalao manana olana raha toa ka tsy manana tranomboky sary 32-bit ny rafitra fandefasana azy ireo.
Ary, na dia bitika 64 aza ny fampiharana Steam, maro amin'ireo lalao video ao amin'ny magazay Steam tsy miasa amin'ny sombin-javatra 64 izy ireo. Fa kosa, miankina betsaka amin'ireo tranomboky sary 32-bit taloha izy ireo mba hiasa tsara.
Mba hamahana izany dia afaka manomboka amin'ny fametrahana ireo tranomboky 32-bit isika ao amin'ny rafitra. Azontsika atao izany amin'ny alàlan'ny fanokafana terminal izay hanoratantsika ireto baiko manaraka ireto.
Ho an'ireo mampiasa Ubuntu na fizarana mifototra amin'izany, andao ampiana ity tahiry manaraka ity:
Ary handeha eo amin'ny menio isika ary hitady "Rindrambaiko sy fanavaozana" na avy amin'ny terminal azontsika atao ny manokatra azy amin'ny:
Eto isika dia hitady ny "Drivers Tambahan" ary hanova ny mpamily Nvidia ankehitriny ho iray amin'ny lisitra izay vaovao kokoa.
ankehitriny, ho an'ireo izay mampiasa Debian, ao amin'ny terminal dia hampiakarinay ireo tombontsoa miaraka:
Ary handeha hitendry ao amin'ny terminal izahay:
raha mbola ho an'ireo mpampiasa Arch Linux na misy derivative an'ioTokony ho fantatrao fa ny vondrom-piarahamonina Arch Linux dia manao asa lehibe amin'ny fanomezana ny mpampiasa fitaovana hanamboarana tranomboky sary 32-bit mba hahatonga ny Steam miasa amin'ny tsara indrindra.
Mba hanaovana izany, hanokatra terminal izahay ary hanoratra:
Ny raharaha Fedora, Misy fomba maro samihafa hahazoana fidirana amin'ny tranomboky ilaina amin'ny fampiatoana ny olana amin'ny lalao Steam isan-karazany.
Ho an'ity dia hanohana ny tahiry RPM Fusion izahay, izay alefa amin'ny fomba somary tsotra avy amin'ireo kinova farany amin'ny fizarana.
Ankehitriny, ao anaty terminal dia mila manoratra ity baiko manaraka ity fotsiny isika:
Ary avy eo, tsy maintsy ampifanarahintsika amin'ny tranokala 32-bit ireo tranomboky:
Raha tsy mety aminao ny fametrahana ireo tranomboky 32-bit amin'ny rafitrao, azonao ampiasaina ity fomba hafa ity.
IZA dia misy ny fanalana ny rindranasao avy any Steam ary avereno apetraka, fa ampiasao ny kinova Flatpak.
Hatramin'ny nametrahana Steam avy tao Flatpak, ny tranomboky rehetra Nvidia dia apetraka ho azy amin'ny alàlan'ny rafitra Flatpak ihany koa, hahazoana antoka fa mandeha tsara ny lalao rehetra.
Mametraka ny kinova Flatpak an'ny Steam, tsy maintsy ampian'izy ireo aloha ny fanohanana Flatpak amin'ny rafitrao, io dia azo atao amin'ny fanoratana ny iray amin'ireto baiko manaraka ireto ao amin'ny terminal.
Debian, Ubuntu na ny derivatives avy amin'ireo:
Amin'ny tranga misy ny OpenSUSE:
raha mbola ho an'ireo izay mampiasa Arch Linux na fizarana azo ity:
Ho an'ireo mpampiasa Fedora dia tsy mila miahiahy momba ny fanampiana fanampiana izy ireo satria avelany ho lasa default amin'ny rafitra.
Efa misy fanampiana fanampiny, ankehitriny dia hanoratra ireto baiko manaraka ireto izahay hahafahanao mametraka Steam avy amin'ny flatpak amin'ny rafitra:
sudo flatpak remote-add --if-not-exists flathub https://flathub.org/repo/flathub.flatpakrepo<
Raha vantany vao vita ny fametrahana dia mila miditra ao amin'i Steam indray isika ary misintona ireo lalao tokony handeha milamina tsara amin'ny rafitrao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Tutorials / Manuals / Tips » Mamaha olana amin'ny lalao Steam miaraka amin'ireo mpamily Nvidia
Fahazoan-dàlana ho fampandrosoana ny lozisialy malalaka sy misokatra: Fomba fanao tsara
xow: mpibaiko Linux an'ny Controller Xbox One